Mpanamboatra masinin-tsolika solika ASTM Inch, mpamatsy - China ASTM Inch Hydraulic Butt Fusion Machines Factory
Fanohanana mailaka sales@sudabuttfusion.com
Milimetatra milina fitifirana milina
Masinina fampifangaroana hidin-tsolika ASTM
Masinina fanamafisam-peo mitete-be
Masinina fampifangaroana hidin-tsolika hidin-trano
Masinina fampifangaroana bokotra manual
Milina fanamafisana Fabrication mety
Milina fanamafisana amin'ny atrikasa
Milina Fusion Machine
Saw-tarika Multi Angle Band
Masinina electrofusion mpanova
Takelaka plastika mandeha ho azy
Masinina fanamafisam-peo PPR
Masinina fampifangaroana 12 ~ 24 santimetatra
Fampiharana sy endri-javatra ► Mety amin'ny fantsom-boalavo fantsona plastika sy fittings vita amin'ny PE, PP ary fitaovana PVDF. ► Misy ny rafitra fototra, tariby hydraulic, fitaovana fanaovana planina, takelaka fanafanana, harona ary faritra tsy voatery. ► takelaka fanamafisana mifono PTFE azo esorina miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso maripana avo lenta. ► Ny fanerena ambany dia miantoka ny kalitaon'ny fantsom-pitaterana azo antoka amin'ny fantsona kely. ► Ny toeran'ny welding azo ovaina dia ahafahana manamboatra fittings isan-karazany mora kokoa. ► Metatra faneriterena avo lenta sy tsy azo antoka ...
Masinina fampiraisana 24 ~ 36 inch
Fampiharana sy endri-javatra ► Mety amin'ny fantsom-boalavo fantsona plastika sy fittings vita amin'ny PE, PP ary fitaovana PVDF. ► Misy ny rafitra fototra, tariby hydraulic, fitaovana fanaovana planina, takelaka fanafanana, harona ary faritra tsy voatery. ► takelaka fanamafisana mifono PTFE azo esorina miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso maripana avo lenta. ► Ny fanerena ambany dia miantoka ny kalitaon'ny fantsom-pitaterana azo antoka amin'ny fantsona kely. ► Ny toeran'ny welding azo ovaina dia ahafahana manamboatra fittings isan-karazany mora kokoa. ► Metezin'ny tsindry avo lenta sy hentitra ...
Masinina fampiraisana 24 ~ 48 santimetatra
Masinina fampifangaroana 2 ~ 6 santimetatra
8 ~ 18 mirefy fusion milina
Masinina fampifangaroana 4 ~ 12 inch
Suda Milina Sodina plastika mampiseho amin'ny 2019 ...
07.07,20Jona 16, 2017
54inch ASTM Standard In-Ditch natahiry bokotra ...
Ny diamete fantsom-pandrefesana lehibe indrindra any Shina ...